Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee Bariga Sacuudi Carabiya oo shirkoodii caadiga ahaa isugu yimid.
Jaaliyada Ogadeniya ee Bariga Sacuudi Carabiya oo shirkoodii caadiga ahaa isugu yimid.
Posted by ONA Admin	/ December 17, 2011
Jaaliyada Soomalida Ogadeniya ee Bariga Sacuudi Carabiya Dammam ayaa shir balaadhan isugu yimid Maalinimadi Jimcaha ee Bishan December 16keedii 2011. Jaaliyada oo shirkan abaabul weyn u gashay ayaa waxa kasoo qeyb galay jaaliyadda ku nool Bariga Sacuudi Carabiya. Shirkan oo markii ugu horeysay kulmiyay qeybaha kala gadisan ee bulshada sida Odayada, haweenka, dhalinta iyo aqqoonyahankoodaba.
Shirkan oon loo kala hadhin ayaa waxa lagaga hadlay lanasoo bandhigay waxqabadkii jaaliyada taniyo intii ay jirtay jaaliyadu waxa kale oo lagu gorfeeyay Qorshayaasha horyaala iyo waliba jaaliyadu waxa ay qaban karto mustaqbalka dhow iyo kan fog labadaba.
Shirkan ayaa waxa laga soo jeediyay qudbado aad muhiim u ah oo lasocda wacyiga lagu jiro maanta. Waxaana ladhageystay warbixinihii ugu danbeeyay oo looga warbixiyay xaalada dhulka Somalida Ogadeniya ku suganyahay iyo siyaasada Ogadeniya meesha ay marayso gude iyo dibadba. Shacabka Somalida Ogadeniya ee ku dhaqan wadanka KSA oo ah dad abaabulan una taagan sidii ay qeybtooda ugasoo baxi lahaayeen si loo gaadho Xoriyad. ayaa waxa ay soo saareen go’amo lagu canbaareynayo Guumeysiga foosha xun ee Abbysinia, waxa kale oo ay ku booriyeen bulshada somalida Ogadeniya inaysan kadaalin halganka dheer ay ugu jiraan xoriyada dhulkooda hooyo. Shirkan ayaa sidoo kale lagu ballan qaaday in lasii xoojiyo isgarab istaaga bulshada radyidka ah ee ku tabaaleysan xeryaha qaxootiyada geeska Afrika.
Shirkan iyo gunaanadkii waxaa lagubalamay in shaqada jaaliyada Sacuudi carabiya iyo iskaashiga lasii xoojiyo iyo howlo kale oo badan oo kamid ah shaqo maalmeedka jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Sacuudi Carabiya